Muimbi Bob Nyabinde Anoti Ave Bofu neKuda kweChirwere cheShuga
Nyamavhuvhu 24, 2020
Muimbi ane mukurumbira munyika, Bob “Headmaster” Nyabinde, anoti haachaona zvichitevera kurwara kwenguva yakareba nechirwere cheshuga, asi asingazive kuti aive nechirwere ichi.
Nyabinde, uyo akamboshanda semukuru wechimwe chikoro kuKwekwe, anoti vanhu vanofanirwa kupota vachiongororwa hutano hwavo nguva dzose, sezvo zvimwe zvirwere zvichizoonekwa zvakomba kana munhu asingaongororwe hutano hwake.
Nyabinde anoti akamboyambirwa nemumwe chiremba aiva amuona achinwa zvinwiwa zvinotapira, asi haana kuzviteerera nguva iyoyo nokuti pfungwa dzake dzaiva dzakatarisana nekuridza mumanzi chete.
Nyabinde anoti akazoenda kunoongororwa nenyanzvi dzehutano mushure mokunge atadza kuimba kuLeopard Rock Motel, mudunhu reManicaland zvikaonekwa kuti maziso ake aiva atokuvara zvokusarapika.
Nyabinde anoti kunyange hazvo ave bofu, haana kuregedza kuimba, kunyangwe hazvo pari zvino asiri kuimba nepamusana pachirwere cheCovid 19 icho chakatekeshera pasi rose.
Mumwe murume akasangana nedambudziko raNyabinde VaSendiso Ndlovu, avo vanoshanda nesangano reSayWhat, vanoti vakaitawo bofu mugore 2008 vaine makore makumi mmaviri nemanomwe mushure mokunge vapedza dzidzo yepamusoro soro paUniversity of Zimbabwe.
VaNdlovu vanoti vakaona nyanzvi inorapa maziso, Dr Solomon Guramatunhu, avo vakavaudza kuti maziso avo aisazoona nokuti aiva akuvara nechirwere cheshuga zvokuti vave kufamba nemubatsiri.
Vachitaura pamusangano weZimbabwe National Practictioners Association, nyanzvi munyaya dzezvirwere zvemaziso, Amai Susan Shonhiwa, vakakurudzira vanorapa kuti vakurumidze kuudza varapwi vavo kuti vaende kuzvipatara kune nyanzvi zvirwere izvi zvisati zvakomba.
Sangano reDiabetic Association of Zimbabwe rinoti nepamusana pekuti vanhu vakawanda havaongororwi chirwere cheshuga, ndizvo zvakwidzawo matenda emoyo, hupofu, nekugurwa kwemakumbo.
Ongororo yakaitwa nebazi rezvehutano inoratidza kuti munhu mumwe chete kubva muvanhu gumi munyika, ane chirwere cheshuga.
Mutevedzeri wemukuru anoona nazvematenda asingatapuriranwe mubazi rehutano, Dr Justice Mudavanhu, vakaudza Studio 7 kuti hurumende ine hurongwa hwekupinda munzvimbo dzakasiyana siyana ichichenjedza veruzhinji maererano nezvechirwere cheshuga nokuti zvakaonekwa kuti vanhu vanonyanya kurwara nedenda reCovid 19 vanhu vane matenda eshuga nezvirwere zvemoyo.
Amai Kamala Harris Votoreswa Mhiko naAmai Sonia Sotomayor
Vanhu Mazana Maviri (200) Vofa neCovid-19 Mumazuva Manomwe Adarika
Nhengo Ina dzeZanu PF Dzinofa neChirwere cheCovid-19 Musi Mumwe Chete